U-Edwin Perkins Uncedo lweKool-Aid ngowe-1920s
U-Edwin Perkins wasungula isiselo esithandwa kakhulu kwii-1920s
I-Kool-Aid ngugama lendlu namhlanje. I-Nebraska egama linguKool-Aid njengoko igosa layo elisemthethweni lisela ngasekupheleni kwee-1990, ngoxa iHastings, Nebraska, isixeko apho isiselo esiphunga senziwe khona, "ugubha umkhosi wonyaka wehlobo oluthiwa yi-Kool-Aid Days kwiveki yesibili ngo-Agasti, ngozuko ibango lalo dolophu, "ibhala i-Wikipedia. Ukuba ungumntu omdala, mhlawumbi uneminkumbulo yokusela isiselo esinomphunga ngexesha lokutshisa, iintsuku zasehlobo njengomntwana.
Kodwa, ibali le-Kool-Aid kunye nokuphakama ekuthandeni kuyinto enomdla-ngokoqobo ibali-ngongoma-ndaba.
"U-Edwin Perkins (ngoJanuwari 8, 1889-ngoJulayi 3, 1961) wayehlala echukunyiswa yi-chemistry kwaye wayenandipha izinto ezinokuqulunqa izinto," kubhala iMicrosoft Hastings yeMveli neNkcubeko, ekuchazeni umvelisi wesiselo kunye nomhlali owaziwayo kakhulu. Njengenkwenkwana, uPerkins wasebenza kwisitoreji sakhe sentsapho, apho-phakathi kwezinye i-thinigs-wathengisa umkhiqizo omtsha obizwa ngokuthi nguJell-O.
I-dessert ye-gelatine yayineentlanzi ezintandathu ngexesha, eziveliswe kumxube ophuhliweyo. Le nto yayinePerkins ekucingeni ngokudala iziphuzo zokuxuba. "Xa intsapho yakhe yafudukela enyakatho-ntshona-ntshona yeNebraska ekupheleni kwekhulu (lama-20), uPerkins osemncinci wazama ukuziqhelanisa ekwakhiweni likamama waza wenza i-Kool Aid Aid ibali."
U-Perkins kunye nosapho yakhe bathuthela eHastings ngo-1920, kwaye kuloo mzi ngo-1922, uPerkins wasungula "i-Fruit Smack," eyayihamba phambili nge-Kook-Aid, eyathengisa ngokuyinhloko ngeposi.
U-Perkins wabiza kwakhona isiselo seKool Ade kunye no-Kool-Aid ngo-1927, i-Hastings Museum inqaku.
Konke kuMbala weDime
"Imveliso, eyathengiswa nge-10 ¢ ipakethi, yaqala ukuthengiswa kwi-wholesale food, i-candy kunye nezinye iimarike ezifanelekileyo ngokuthumela iimeyile ezintlanu zintsimbi: i-strawberry, i-cherry, i-lemon-lime, iidiyibhile, i-orange kunye ne-raspberry," ibhala Hastings Museum.
"Ngowe-1929, i-Kool-Aid yasasazwa kuwo wonke umhlaba kwiindawo zokutya kunye nabathengi bokutya.
U-Perkins wayesithengisa nezinye iimveliso ngeposi-kuquka umxube wokunceda ababhemayo banqamle ugwayi-kodwa ngowama-1931, imfuneko yokuphuza "yayinamandla, ezinye izinto zatshitshiswa ngoko uPerkins wayengagxininisa kuphela kwi-Kool-Aid," Amanqaku omncedisi we-Hastings, eyongezelela ukuba ekugqibeleni wagqiba ukuveliswa kwesiselo kwi-Chicago.
U-Perkins wasinda kwi-Depression Great Depression ngokuyeka ixabiso lepakethi ye-Kool-Aid kuphela ngo-5 ¢ -iyo yayithathwa njengento enyanzelisayo nakwiiminyaka ezinzima. Ukunciphisa intengo kusebenze, kwaye ngo-1936, inkampani kaPerkins yayithumela ngaphezulu kwe-1.5 million yezigidi ngokuthengiswa kwonyaka, ngokutsho kweeKol-Aid Days, iwebhusayithi exhaswe nguKraft Foods.
Kwiminyaka kamva, uPerkins wathengisa inkampani yakhe kwiGeneral Foods, ngoku iyingxenye yeCraft Foods , eyenza ibe ngumntu ocebileyo, ukuba yinto edabukisayo yokuyeka ukulawulwa kwayo. "NgoFebruwari 16, 1953, u-Edwin Perkins wabiza bonke abasebenzi bakhe ukuba baxelele ukuba ngoMeyi 15, ubunini beMveliso yePerkins beza kuthatyathwa yi-General Foods," kuchaza iWebhsayithi yeeNkxaso zeKool.
"Ngendlela engacwangcisiyo, wayilandela imbali yenkampani, kunye neentlanu zayo ezithandayo, kwaye indlela efanele ngayo ngoku i-Kool-Aid iya kujoyina i-Jell-O kwiNtsapho yokuQala yokuTya."
Imbali ye Lasers
Isingeniso kwiPop - Imbali ye-Soft Drinks
Imbali yeHalloween okanye iSamhain, Usuku lwabafileyo
Inventor iLazzlo Biro kunye neMfazwe yePalpoint Pens
UkuBaluleka okuBalulekileyo kunye neNqununu, eDlulileyo nekhoyo
I-1984 yeF Ford Mustang Anniversary Edition GT350
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Alabama
EYurophu kunye neMfazwe yaseMelika
Indlela yokudibanisa "Sebenzisa" (ukusebenzisa) ngesiFrentshi
Cómo pueden indocumentados sacar licencia de manejar e Nuevo México
Iindaba Ezimangalisayo NgoSusan B. Anthony
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo ze-Cheerleaders
Iincwadi eziqhelekileyo zeGraam Books
Ngaba Uhlala Uhlamba Iingqungquthela ezingayeki Iintonga Ezizungeze Amehlo Akho?
Izipho Zomoya: Unceda
ULázaro Cárdenas del Rio: UMexico kaMnu Ucocekile
Massacre yaseMexico yaseTexicoloxco
Ukunikezelwa kobuNtu kuBomi bemihla ngemihla
Iibini zeLizwi ezingaphendulwanga
Iimpawu zeClass Classic ezivela kwi-Comic-Stand Up Up-I-Jim Gaffigan
Iindleko zee-Tennis Izifundo zabaqalayo
I-CardLayout Example Program
Imfundo eLwazi oluPhezulu kunye neCheaching Teaching